प्रधानमन्त्रीज्यू, डुब्न लागेको २४ अर्ब उठ्ला ? – Hotpati Media
प्रधानमन्त्रीज्यू, डुब्न लागेको २४ अर्ब उठ्ला ?
१८ बैशाख २०७६, बुधबार ०७:२० मा प्रकाशित (2 बर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १ मिनेट
काठमाडौं-विकास निर्माण कार्यका लागि भन्दै ठेकेदारहरूले सरकारी अधिकारीको साँठगाँठमा लगेको मोबिलाइजेसनबापतको २४ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्कर्ष छ । यो समाचार राजधानी दैनिकले प्रथम पृष्ठमा प्राथमिकता दिएर छापेको छ ।
सो रकम उठाउन सरकारी स्तरबाट आवश्यक पहल र एक्सन नगर्ने हो भने राज्यकोषको त्यति ठूलो रकम निश्चित रूपमा डुब्ने भन्दै अख्तियारले रकम उठाउन पटकपटक सरकारको ध्यानाकृष्ट गराउँदै आएको छ ।
सागर पण्डितले लेखेको सो समाचार अनुसार अख्तियारले विकास निर्माण कार्य गर्ने क्रममा ठेकेदारहरूले मोबिलाइजेसनको नाममा लगेको २४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले नै उठाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै गत माघमा सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदनसहितको पत्र नै पठाएको थियो । त्यस यता पनि अख्तियारले सरकारका विभिन्न निकायलाई बोलाएर रकम उठाउन आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ तर पनि हालसम्म रकम उठाउन कुनै पहल हुन नसकेको भन्दै अख्तियार असन्तुष्ट छ ।
ठेकेदारबाट राखिएको धरौटीस्वरूपको ६ अर्ब रुपैयाँ जफत गर्न पनि सरकार असफल देखिँदै आएको छ । ठेक्का सम्झौता रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशतले हुन आउने कार्यसम्पादन जमानतबापतको ६ अर्ब धरौटी रकम असुल गर्न सरकारी पक्ष असफल देखिएको हो । सरकारले ठेक्का पूरा नगर्ने ठेकेदारबाट धरौटी रकम जफत गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सरकारी अधिकारीको गैरजिम्मेवारीपनका कारण राज्यकोषमा आउन सक्ने ६ अर्ब रुपैयाँ पनि गुमेको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले पत्र पठाएको तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारी निकायले मोबिलाइजेसनबापतको रकम ठेकेदारबाट उठाउन पहल गर्न सकेका छैनन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मोबिलाइजेसनबापतको रकम लगेर काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनीहरूले लगेको २४ अर्ब रुपैयाँको गहन खोजी हुने विश्वास पलाएको छ ।
सो रकम लिएर ठेकेदार बेपत्ता छन् । उनीहरूले सम्झौताबमोजिम कुनै काम नै नगरे पनि सरकारी निकायलाई गुमराहमा राख्दै २४ अर्ब रुपैयाँ आफ्नै खल्तीमा राख्न सफल भएका थिए । २४ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुग्दा पनि विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने तालुक निकाय भने कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।